Sei katsi dzisingakwanise kudya chokoreti? Noti Katsi
Sei katsi dzisingakwanise kudya chokoreti?
Laura Torres chinobata mufananidzo | | Zvokudya
Katsi dzinoda kuziva, zvekuti iwe unofanirwa kutarisa zvavanoisa mumiromo yavo zvakanyanya. Kune zvikafu zvinoverengeka zvine chepfu kwavari, saka zvakakosha kuti tivape chete izvo zvavanogona kudyasekudaro iwe unogona kuve nematambudziko akakomba.
Kumwe kwekusahadzika kunowanzoitika kwatinowanzo kuve nako patinogara neane furry ndeiya sei katsi dzisingakwanise kudya chokoreti. Kana iwe uchida kuziva, ramba uchiverenga nekuti nhasi tichafumura chakavanzika.
1 Chii chinonzi theobromide uye nei katsi yangu isingadye chokoreti?
2 Ndinoziva sei kuti katsi yangu yakaiswa chepfu nekudya chokoreti?
2.1 Chii chandinoita kana kati yangu yadya chokoreti?
2.2 Chii chinonzi kurapwa kwechokoreti chepfu?
Chii chinonzi theobromide uye nei katsi yangu isingadye chokoreti?
Chokoreti inokuvadza katsi nembwa.
Chokoreti ine caffeine, theobromine uye nemafuta akawanda. Mafomu anonyanya kutyisa katsi cocoa poda uye chokoreti mabhawa ekubika.
Theobromine pamwe ne caffeine ndeyekemikari boka realkaloid methylxanthines.
La theobromine ndicho chinhu chikuru chine chepfu muchokoreti uye chikuru chinokonzera chepfu nekuda kwekumwa kwechokoreti mukatsi nembwa.
Katsi yako haigoni kudya chokoreti nekuda kweiyo diki saizi uye chiropa chayo ndecheye nyama yakaoma. Izvi zvinoita kuti vashaye mamwe enzyme anobatsira kugadzirisa zvimwe zvine chepfu, kusanganisira theobromine. Saka kana huwandu hwakanwiwa hwave hwakawandisa kwazvo, uno mukomboni unoungana muropa rekati. Uye zvakare, iyo yakakwira mafuta zvemukati inogona kukonzera chirwatata.
Semhedzisiro yezvinhu izvi, Kana kati yako yaizodhakwa nemukana, chikamu chekudzoreredza chaizononoka kupfuura imbwa.
Chokoreti inoisa njodzi huru kuhutano kukitsi nembwa. Iyo Uturu hweizvi hunoenderana nedosi, ndiko kuti, pachiyero chechokoreti inodya uye huremu hwekati yako, kuwedzera kune chiyero chekuchena kwechokoreti. Kuva mukaka chokoreti ndeyekuti ine zvishoma chepfu.
Naizvozvo, kana katsi yako ikadya kana chidimbu chidiki chechikafu ichi, hupenyu hwayo hunogona kuve munjodzi.
Ndinoziva sei kuti katsi yangu yakaiswa chepfu nekudya chokoreti?
Zviratidzo zvakasiyana zvakanyanya, izvi zviri zvinotevera:
Wedzera kuwedzera kweropa.
Kunyanyisa kudonhedza mate
Polydipsia (inoda kunwa mvura yakawanda).
Chii chandinoita kana kati yangu yadya chokoreti?
Muzviitiko zvakakomba kwazvo, ndiko kuti, mune idzo makwikwi anga akareba kwazvo, mhuka inogona kufa mumaawa makumi maviri nemana chete. Saka kana kati yako yadya chokoreti, Izvo zvakakosha kuti iwe uende naye kunzvimbo yezvipfuyo nekukurumidza sezvazvinogona kudzivirira kuti usvike pamamiriro akadaro.
Kutanga Kwazvose Fonera vet wako uye muudze kuti urikuenda kuchimbichimbi kamuri, zvakakosha kuti utaure kuti akadya chokoreti.
Usaedze kumuita kuti arutse ari kumba, nekuti nekitsi zvakaomarara uye tinogona kukuvadza zvakanyanya.
Kana isu activated kabhoni kumba tinogona kupa katsi yedu mapiritsi mashanu. Kushanda kabhoni kunoitisa kudzikisira kudzokerazve kweiyoobromine uye caffeine, kudzivirira kwavo kunwa kubva pakuzara.
Kana usina marasha emota pamba, zvinogona kunge zvakanaka kuupa mvura kana chikafu kuti uderedze kupinza mudumbu uye nekudaro unoderedza zviratidzo.
Kana iwe uchifunga kuti katsi yako yakwanisa kudya chokoreti asi iwe usina chokwadi, ndinokurudzira kuti iwe ucherechedze mumaawa makumi maviri nemana anotevera kuti uone chero zviratidzo nekukurumidza sezvazvinogona.
Chii chinonzi kurapwa kwechokoreti chepfu?
Marapirwo anoonekwa nachiremba kuti akakodzera anoenderana nemamiriro anoita katsi yako kunzvimbo yezvipfuyo uye zviratidzo zvainazvo painosvika kukiriniki yezvokurapa.
Kana chiri chokwadi chaicho kuti chawakadya chokoreti, chinhu chekutanga chavachaita kuchipatara chezvemhuka kukurudzira kurutsa nekuita gastric lavage. Uye ipapo unozopihwa mashandiro emarasha akasanganiswa nemvura kuburikidza nesinji.
Muchiitiko chekusava nechokwadi, pamwe, chinhu chekutanga chinoitwa iiyo x-ray uye kuongororwa kweropa.
Kuti udzivise kupera mvura uye kukurudzira kugadzirwa kweweti, iwe unozopihwa fluid fluid. Chekupedzisira, iwe unozopihwa mishonga yekudzora iyo kurova kwemoyo uye BP. Uye sedatives kudzikamisa katsi uye anticonvulsants.
Seimwe nhanho yekuwedzera, katsi yako inogona kuve nekateti yakaiswa kudzivirira caffeine kubva mukudzoswazve kuburikidza nechironda.
Zvakare, muchiitiko chekuti kati yako inoda kuiswa muchipatara kwemazuva mazhinji uye ine pancreatititis, jejunostomy tube inogona kuiswa. Neye probe inoonekwa kuti rwatata harushande panguva yekudzoreredza. Nekudaro, inzira inonetsa inoiswa kuburikidza nekuvhiyiwa uye pasi peanesthesia.
Mukupedzisa, chengetedza macandi uye machokoreti mumakani akavharika uye kure nekati yako, nekuti misikanzwa yako shoma inogona kupedzisira yaenda kun'anga uye munyatwa.
Isu tinogara tichifanira kutarisa kuti tipe shamwari yedu ine furry zvakanakisa, asi kune chikafu chakati wandei chatinofanirwa kubvisa kubva pane chinyorwa. Kazhinji iwe unotofanira kupa Ini ndinofunga uye kunyorova chikafu chakanangana nefimin. PAsi kana iwe uchida kumupa chikafu chechisikigo, kuwedzera kune chokoreti kune zvimwe zvekudya zvausingakwanise kumupa kana, zvakadai se: mabhonzo, hanyanisi, tuna yakakanyiwa (kunze kwekunge ichiratidzwa katsi), gariki.
Ndinovimba wakafarira ichi chinyorwa uye chakabatsira iwe. Uye iwe unoziva, kukupa mubairo, ini ndinokurudzira kuti iwe utenge chaiwo kubata kwekitsi. Nenzira iyi, hutano hweshamwari yedu hahuzove mune chero njodzi, uye iwe unenge wakadzikama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvokudya » Sei katsi dzisingakwanise kudya chokoreti?
Ikati yeBangali, furry ine kutaridzika kwemusango uye nemoyo muhombe
Ndiani aive Don Gato, chipfuwo chakatendeka cheAuronplay